Indawo eziGcina iincwadi zeMoneysupermarket.com
30 Septemba 2021 | Ukuhlaziywa: 30 Septemba 2021
IMoneysupermarket.com eyona nto ithengwayo yokuthenga ngamaxabiso okunyuka kwamaxabiso ukunyusa ukugcwala kwabantu
26 Agasti 2021 | Ukuhlaziywa: 26 Agasti 2021
IMoneysupermarket.com (MONY) yenye yezona ndawo zaziwayo e-UK kodwa isitokhwe sayo sithathe ukubetha ngexesha lobhubhane.
Ke kutheni le nto abantu beyeka ukukhangela ezona ntengiso zibalaseleyo kwiimveliso kunye neenkonzo ngexesha lobhubhane? Cinga iiholide kunye nohambo.
Umzi mveliso wezohambo noweholide uvaliwe ngenxa yolu bhubhane kwaye kutshanje uqalile ukuvuselela e-UK nakwezinye iindawo zehlabathi, kwaye ngenxa yoko iMoneysupermarket.com ithathe indawo.
Ngaphandle kweinshurensi yokuhamba eza kukhangelwa kwaye ithelekiswe, iMoneysupermarket.com yabona ukwehla kwengeniso.
Inkampani ekwi-Intanethi ichaze iziphumo zayo zethutyana ngoJulayi. Kwiinyanga ezintandathu ukuya kuma-30 kuJuni 2021, ingeniso yehle nge-11% ukuya kwi- £ 162.3 yezigidi. Ingeniso yeenyanga ezili-12 ezilandelelweyo yayiyi- $ 324 yezigidi, ethelekiswa nengeniso enyukayo ukusukela ngo-2015 (£ 282 yezigidi) ifikelela kwi-388 yezigidi zeedola ngo-2019.
Ingeniso ihlupheke ngokuhla kwe-10% ekuthathweni kwecandelo layo le-Inshurensi ukuya kuthi ga kwi-80.5 yezigidi, ngelixa icandelo leMali (amakhadi etyala, iimali mboleko kunye nemali mboleko) yayiphantsi kwe-3% ukuya kwi-35.3 yezigidi. Ingeniso yeinshurensi yokuhamba yawa ngokucacileyo eweni.
Inkampani ikwachaze ukuba umvuzo opheleleyo wehle nge-31% ukuya kwi- $ 28 yezigidi.
Nangona ivume ukuba "kunzima" iimeko zokurhweba iMoneysupermarket.com yathi inkqubo yayo yokusebenza yayisemkhondweni - isalathiso kumalinge ayo okuphucula itekhnoloji yayo ukunciphisa iindleko zokufunyanwa kwabathengi ngokuthi "kuphuculwe iziseko zethu zedatha". I-Google Cloud iya kuba yinkampani "yedatha ephambili yedatha" kwaye inkqubela phambili iyaqhubeka.
Kuthethathethwano lwabathengi, inkampani ithi iphumelele ngokudibanisa isoftware yeBraze eyenza ukuba kubekho imikhankaso yentengiso eqhutywa yidatha.
Ungathenga izabelo zeMoneysupermarket.com kwi-eToro nge-0% ikhomishini kwaye akukho xanduva lwesitampu lokuhlawulela abatyali mali base-UK
Ndithathe iRhafu ijongeka ngathi yeyokwakha ingeniso ethembisayo ephindaphindayo
Iziqhamo zokuqala zetekhnoloji yayo ehlaziyiweyo yinkonzo yeT Pick Me A Tariff, eyenza ukuba abathengi benze umsebenzi otyhafisayo wokuhamba ngamandla kwintengiso yamandla e-UK.
Inkonzo yokubhaliselwa ngoku ine-140,000 yokubhalisa kunye ne-130,000 engaphezulu engabhalisanga kodwa isebenzise indlela yenkonzo ukutshintsha umboneleli wamandla. Inkonzo yoluhlu lwamaxabiso ibonelelwa ngendawo yeMoneySavingExpert esekwe ngusaziwayo “osindisa imali”, intatheli uMartin Lewis, eyathengwa yiMoneysupermarket.com ngo-2012 nge- $ 19 yezigidi.
Iakhawunti yamandla ejikeleze iipesenti ezingama-50 zengeniso yecandelo leeNkonzo zeKhaya kunye nokunyuka kwamaxabiso e-wholesale ombane kunciphise ukhetho lokonga umthengi kutshintsho, olwenze buthathaka uguquko. Nangona kunjalo, inkampani ilindele ukuba umlawuli anyuse ixabiso lentengo elinokuthi landise igumbi lokonga, ucinga ukuba amaxabiso apheleleyo akaqhubeki ukwanda.
Kwakukho iinkcukacha ezithe vetshe malunga nokufunyanwa kwe-icelolly.com, eya kuthi idityaniswe neMoneysupermarket.com kwipropathi yohambo lwevenkile. Injongo kukusebenzisa ukuthenga ukuseka indawo yokuthelekisa yokuma yodwa. Isivumelwano siye sasuswa ngabalawuli kule veki.
Kwezinye iindaba ezimnandi zokubuya kwabanini zabelo, inkampani ngoku inezivumelwano endaweni yokuthatha isigqibo-kumgaqo wokubolekwa kwemali mboleko kunye ne-35% yabanikezeli bemali mboleko yase-UK emva kokusayina isivumelwano neNatWest.
Isikhundla esomeleleyo sokwenza imali kwenkampani sibonwa ebhodini siphakamisa isabelo sethutyana se-3.1p, ngokufanayo nakunyaka ophelileyo. Ukuhamba kwemali okusebenzayo kwakuyi £ 35.1 yezigidi, xa kuthelekiswa £ 41.7 yezigidi ngo-2020. Ekupheleni kukaJuni iMoneysupermarket.com yayinesikhundla semali ye- $ 8.8 yezigidi, inyuke ukusuka £ 7.5 yezigidi kunyaka ophelileyo.
Ukunyuka kwamaxabiso kuya kusenza sazi ngakumbi iindleko kwaye iMoneysupermarket inenzuzo ngakumbi
Kodwa ingxaki yenye inkampani lelinye ithuba. Ngokuqinisekileyo, sikubonile oku kunye nomsebenzi wasekhaya, owawunabaphumeleleyo kwisitokhwe, ukusuka kuZoom ukuya eKingfisher (umnini wecandelo lokuphucula intengiso ye-B & Q) kunye nabaphulukene neli shishini lokuhamba kunye neestokhwe ezinxulumene noko.
Nangona kunjalo, ukujonga imeko yeshishini elihlumayo iitafile zinokuba zijikajike ekuthandweni kweMoneysupermarket.com, kunye nenqaku labo kubathengi abanolwazi abafuna ukunciphisa iindleko kwaye bafumane eyona nto ibalulekileyo iba yinto efanelekileyo ngakumbi - sithetha ngokunyuka kwamaxabiso .
Ukunyuka kwamaxabiso kuya kwenza ukuba sonke sicinge ixesha elide kwaye kunzima nangakumbi ngexabiso layo yonke into kwaye kusikhuthaze ukuba sijonge ukunciphisa iindleko apho sinokuthi sibe ngabathengi abanolwazi. Kwimeko enjalo kusengqiqweni ukulindela indawo ezikhokelela kuthelekiso ukukhusela abasebenzisi abaninzi.
Uluvo olunjalo ngokuqinisekileyo luxhomekeke ekubeni uxinzelelo lwamaxabiso luyaqhubeka kwaye lubonakalise ukuba alunasidima ngokuchasene nokudlula - okanye "ukudlula" ukusebenzisa isigama esikhethwayo seebhanki eziphambili.
Ngaba sinokuqiniseka ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuya kuhlala kuhlala?
U-Mohamed El-Erian, umcebisi oyintloko wezoqoqosho kwingxilimbela yezezimali u-Allianz kwaye ngaphambili ebambe indima efanayo kwibhondi yotyalo mali lwe-Pimco, uzinze kwinkolelo yakhe yokuba kungcono siqale ukuqhela ukunyuka kwamaxabiso. “Ukunyuka kwamaxabiso akuyi kuba yinto yokwexeshana. Ndiqinisekile ngengqondo yam malunga neefowuni ezintathu zangaphambili. Yeyesine le, ”utshilo xa enika izimvo zakhe kwiBloomberg.
Eminye iminxeba afile ngayo yile yokuba iArgentina ayizukusilela, iBrazil ayinakuba njalo, kwaye nokukhula kwezoqoqosho kuya kucotha emva kwengxaki yemali ka-2008.
Kodwa imarike yebhondi ibonisa inkxalabo encinci malunga nokunyuka kwamaxabiso ukuba izivuno ziyinto ehamba nayo - izivuno kunye neerhafu kufuneka zikhuphuke ngenxa yokuba ukunyuka kwamaxabiso kudla kwimbuyekezo yengeniso engapheliyo kwaye inzala ephezulu iya kuthatha ubushushu ngaphandle koqoqosho kunye nokunciphisa ukunyuka kwamaxabiso.
Kodwa oko akwenzeki, ngokuyinxenye ngenxa yokuba imarike yebhondi ijonge ngasemva kananjalo nangenxa “yemigaqo-nkqubo yemali engaqhelekanga” yeebhanki eziphambili, kunye ne-US Federal Reserve, esathenga iibhondi ngesantya esibi.
Ngale nto engqondweni, sicinga ukuba iMoneysupermarket.com iveza ithuba elifanelekileyo lokuthenga kwiimbuyekezo zexesha elide.
Ngokunjalo neRoyal Bank yaseCanada. Nge-23 kaJulayi i-RBC inyuse ixabiso layo ekujoliswe kulo laya kwi-280p ukusuka kwi-270p.
Kwabarhwebi abali-11 abagubungela isitokhwe imvumelwano kukuthenga okuqinileyo, ngexabiso ekujoliswe kulo le-322p eyi-27% yepremiyamu kwixabiso langoku le-253p.
Ungathenga iMoneysupermarket.com kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini.
tags eCommerce, IMoneysupermarket.com (MONY)